Inona no banky tsara indrindra any Korea? – ALinks
KB Kookmin Bank no lehibe indrindra any Korea Atsimo. Miaraka amin'ny fitambaran'ny fananana manodidina ny 422 trillion, ny Repoblika Koreana no nandresy, tamin'ny taona 2020. Miaraka amin'ny fananana manodidina ny 387 trillion ny fandresen'ny Repoblika Koreana, ny Banky Shinhan no laharana faharoa.
Marin-toerana ny vinavinan'ny sehatra ara-bola Koreana. Taorian'ny fahasitranana mafy tamin'ny fahatafintohinana areti-mifindra. Izy ireo dia fototra mafy orina amin'ny fomba fijery marin-toerana. Manana fahasahiranana toy ny fisondrotry ny trosam-panjakana sy ny fahanterana ny mponina. Ny mety ho fifandonana ara-tafika amin'ny Repoblika Demokratikan'i Korea dia olana. Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo eto ambany ny lisitry ny andrim-panjakana ara-bola.
Ny volan'ny Repoblikan'i Korea dia Won, na ₩, na KRW. Manodidina ny 10,000 dolara amerikana, na 8 rupee indianina ny won 600 Repoblika Koreana. Manodidina ny 7.5 Euros na 53 Yuan Sinoa izany.
Ireto ny sasany amin'ireo banky tsara indrindra ao amin'ny Repoblikan'i Korea (ROK), antsoina koa hoe Korea Atsimo. Ny lisitry ny lisitry ny banky ambony any Korea dia mety hanampy anao hanomboka amin'ny banky any Korea.
Vondrona KB ara-bola
Ny foiben'ny orinasa fitazonana ara-bola lehibe indrindra any Korea Atsimo dia ao Seoul. Manome tolotra ara-bola ny sampany. Manao banky fivarotana, banky orinasa ary banky hafa izy ireo. Izy ireo koa dia carte de crédit, fampiasam-bola sy antoka ary fiantohana aina.
Vondrona ara-bola Shinhan
Hanseong Bank lasa Shinhan Financial Group tamin'ny 1897 ary izy no banky voalohany tany Korea. Ny antsinjarany, ny orinasa, ny iraisam-pirenena ary ny Banky hafa dia sehatra efatra voalohany.
Manana sampana 723 sy foibe fitantanana harena tsy miankina 29 any Korea Atsimo ny orinasa. Manana sampana iraisam-pirenena 14 any Seoul koa izy io. Manana mpiasa miisa 13,000 izy io.
Vondrona ara-bola NongHyup
NongHyup Financial Group tamin'ny 1961 ho fampivondronana eo amin'ny Banky Fambolena sy ny Federasiona. Manome antoka ny orinasan'ny vondrona. Fitsipika manokana momba ny famatsiam-bola ara-barotra ara-barotra sy famatsiam-bola teknolojia vaovao.
Ny fiantohana fananana sy ny fiantohana ara-pahasalamana dia safidy hafa. Ankehitriny, Korea Development Bank ao Seoul. Mampiasa 13,400 mahery izy io manerana ny sampana 135. Manana sampana mpikambana 4,786 XNUMX koa izy io.
Korea Development Bank, KDB dia nanomboka tamin'ny 1954 tany Seoul, Korea Atsimo. Ny vokatra petra-bola, vokatra banky orinasa, banky fampiasam-bola, ary vokatra banky iraisam-pirenena dia misy.
Satria KDB Bank dia iray amin'ireo banky 61 ambony eran-tany, manampy amin'ny fanitarana ny indostria stratejika. Ary ny fanavaozana ny orinasa sahirana sy ny famatsiam-bola amin'ny hetsika stratejika fampandrosoana.
Tamin'ny Septambra 2015, ny banky dia nanova ny anarany avy amin'ny Hana Daetoo Securities Co. Ltd. ho Hana Financial Investment Co. Ltd. Manao fampivondronana sy fividianana, famatsiam-bola ho an'ny orinasa, fanangonam-bola ary torohevitra momba ny fitantanana ny risika. Anisan'ny tolotra omen'ny banky ihany koa ny varotra securité sy ny underwriting. Mampiasa olona 12,800 eo ho eo izy io.
Vondrona ara-bola Woori
Mpanjifa tsirairay, orinasa madinika sy salantsalany. Ny orinasa lehibe any Korea Atsimo dia afaka mampiasa ny vokatra banky ara-barotra an'ny Woori Financial Group. Banky ho an'ny mpanjifa, Banky orinasa ary tsenam-bola. Ny banky fampiasam-bola, ny carte de crédit ary ny asa hafa dia fizarana enina an'ny orinasa. Ao Seoul ny Woori Bank ary sampan'ny Woori Financial Group. Mampiasa olona 16,000 989 izy io ary miasa sampana 22 any Korea Atsimo ary XNUMX any ampitan-dranomasina.
Banky indostrialy any Korea
The Industrial Bank of Korea tamin'ny 1961 ary any Seoul. Banky antsinjarany, banky orinasa ary tsenam-bola.
Mampiasa olona 14,000 eo ho eo izy ary mitantana sampana 570. Birao fitahirizana 47 any Korea ary toerana 57 any ivelany.
Ny sandan'ny anjara BNK Financial Group
BNK, manana foibe ao Busan, dia iray amin'ireo konglomerat ara-bola 5 ambony indrindra any Korea Atsimo. Ny orinasa, naorina tamin'ny 1967, dia miasa amin'ny fizarana efatra. Banky, fampiasam-bola ara-bola, fitantanam-bola manokana, ary banky tahirim-bola.
Vondrona ara-bola DGB
DGB Financial Group, naorina tamin'ny 2011, dia iray amin'ireo banky rezionaly lehibe indrindra any Korea Atsimo. Manompo ny mpanjifa any amin'ny faritra Daegu-Gyeongbuk. Fitantanam-bola sy fampanofana trano, vola vahiny, vola. Ary ny bancassurance, ny fitantanana ny fananana, ny famoahana, ny fiampangana, ny vola elektronika ary ny banky amin'ny Internet. Fametrahana, fampindramam-bola ara-teknolojia vaovao, fampindramam-bola manokana ary fampindramam-bola hafa dia misy.
Iza no banky tsara indrindra ho an'ny vahiny any Korea?
Alohan'ny hifindrany any Korea Atsimo, tokony ho fantatry ny olona ny banky. Ary tokony hamaky kely momba ny rafitra hetra koa izy ireo. Ny zavatra iray tokony hotazonina dia ny banky sy ny ATM dia manana ora voafetra. Vitsy lavitra noho ny taloha avy any amin'ny firenena tandrefana ihany koa. Na dia misy ATM manerana ny firenena aza. Tokony hanara-maso ny ora ATM an'ny banky manokana ianao. Efa akaiky kokoa izy ireo any amin'ireo andrim-panjakana kely kokoa.
Banky Kookmin (KB)
Iza no banky foibe any Korea?
Ny Bank of Korea dia banky foibe ao amin'ny firenena, mamoaka ny won Koreana ary miantoka ny vidiny. Manana banky 150 manana fahazoan-dàlana i Korea Atsimo, misy banky ara-barotra 59. Banky manokana 12 ary banky 79 mitambatra. Ny Bank of Korea no mpanara-maso ara-bola izay manara-maso ny firaketana ara-bola. Izy io dia miasa eo ambany fanaraha-mason'ny Vaomieran'ny Sampan-draharaha ara-bola (FSC).
Inona no banky iraisam-pirenena any Korea?
Noho izany, amin'ny maha-tsy mponina anao, ahoana no hanokafana kaonty banky any Korea Atsimo? Satria i Korea Atsimo dia toerana malaza ho an'ny ex-pats sy tanora ex-pats. Maniry ny hampianatra teny anglisy mandritra ny taona vitsivitsy izy ireo ary ny fametrahana kaonty amin'ny banky amin'ny maha vahiny dia tena tsotra.
Ny sarin'ny fonony dia any amin'ny tsenan'i Gwangjang, Changgyeonggung-ro, Jongno 4 (sa) ga jongno gu, Seoul, Korea Atsimo. Sary avy amin'i Grace Lim on Unsplash
Ahoana ny fomba hanokafana kaonty amin'ny banky any Italia?
Enga anie 5, 2022
Ahoana ny fomba hanokafana kaonty amin'ny banky any Somalia?
Ahoana ny fomba hanokafana kaonty banky any Sodana Atsimo?
Aprily 18, 2022
Ahoana ny fomba hanokafana kaonty amin'ny banky any Aotrisy?
Banky any Ozbekistan
Febroary 6, 2022
Janoary 16, 2022